Htoo Myat Thu – Page2– Web/Software Development, Photography, Aviation and My Experiences
Web/Software Development, Photography, Aviation and My Experiences
Domestic Airline Reservation Note ( Myanmar )
Manual Reservation ( Booking via Phone )
Agent Code ( Code Number to identify sale agent )
Travel Season Scope of Myanmar
High Season/Peak Season ( From 01 – October To 30 – April )
Low Season ( From 01 – May To 30 – September )
Adult – Above 12 years old
Child – Between2to 12 years old
Infant – Under2years of age
Infant Limited count by aircraft type
Boeing 737-800 ( 12 ) Pax
E – 190 (6) Pax
ATR – 72 (4) Pax /
Continue reading “Domestic Airline Reservation Note ( Myanmar )” →
By Htoo Myat Thuin Aviation October 26, 2016 October 20, 2017 609 WordsLeaveacomment
Myanmar Airport IATA Codes
IATA Airport Codes of Myanmars – More List ( ICAO codes, Airport Coordinates )
Airline and Airport Code Search at Official IATA Codes is here under http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx
RGN – Yangon International Airport
MDL – Mandalay International Airport
NYU – Nyaung U
NYT – Naypyidaw International Airport
HEH – Heho Continue reading “Myanmar Airport IATA Codes” →
By Htoo Myat Thuin Aviation October 13, 2016 July 7, 2017 48,826 WordsLeaveacomment
Aviation Acronym (CRS, Ground Handling)
I will update the additional codes
CRS – Computer Reservation System
ETL – Eticket List Continue reading “Aviation Acronym (CRS, Ground Handling)” →
By Htoo Myat Thuin Aviation October 13, 2016 October 28, 2016 149 WordsLeaveacomment
direct download link (old version): [[ DOWNLOAD ]]
EOSMSG isatool for DLSR(Canon/Nikon/Pentax etc.) and show you the ShutterCount MirrorUpCount(Canon) SerialNumber etc.
(Support Model)：Rebel XS / 1000D / Kiss F Rebel XSi / 450D / Kiss X2 /40D 50D 1DM4(V4.5)
(Support Model)：EOS M~M2 / 500D~760D(KissX3~8000D RebelT3~T6s) / 60D~80D / 7D~7DMark2 /5D2 5D3 5D4 5DS 5DSR / 1DX 1DXMark2(V5).
တစ်ချို့ DSLR တွေအတွက် Shutter Count စစ် လို့မရတဲ့အခါ ဒီ EOSMSG ကိုသုံးပြီးစစ်လို့ရပါတယ်။
By Htoo Myat Thuin Photography October 5, 2016 October 20, 2017 74 WordsLeaveacomment
New Reservation လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Departure Airport နှင့် Arrival Airport တို့အရင်ရွေးရပါ မည်။ Airport ရွေးရာတွင် ကျွန်တော်ကတော့ Keyboard သုံးရတာပိုကြိုက်ပါတယ်။ မြန်လို့ပါ။ Mouse နဲ့လည်းရွေးလို့ရပါတယ်။ ရွေးလို့ရတဲ့နည်း ၃ မျိုး ကိုတော့အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Continue reading “Sell-More-Seat (Worldticket) System Training (Part 2)” →
By Htoo Myat Thuin Aviation October 1, 2016 October 24, 2016 487 WordsLeaveacomment
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုကို သာမန်အားဖြင့် (IQ) နဲ့တိုင်းထွာလေ့ရှိပါတယ်။ အပြည့် အစုံကတော့ Intelligence Quotient (IQ) ဖြစ်တယ်။ လူတစ်ဦးရဲ့ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုကို စနစ်တ ကျတိုင်းထွာပြီး ရလာတဲ့အဖြေ Quotient ကို ရည်ညွှန်းပြီးသတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွယ်လွယ်ပြောရရင် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သူကို တော်တဲ့သူလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။ IQ မြင့်တဲ့သူဟာ တော်တယ်။ IQ နိမ့်တဲ့သူဟာ ညံ့တယ်လို့ပဲ ယူဆကြတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာတော့ IQ ကို စနစ်တကျတိုင်း ထွာမှုတွေလုပ်ကြတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ကျွန်တော်သိသလောက် စနစ်တကျလုပ်ထားတာမရှိ ဘူး။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ IQ ဟာ ပျမ်းမျှခြင်း ၈၀ နဲ့ ၁၂၀ အကြားရှိကြတယ်။ ၁၂၀ ထက်များရင် သိပ်ထူးချွန်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ၈၀ ထက်နည်းရင်တော့ ဉာဏ်ရည်နိမ့်တယ်လို့ ပြောလေ့ရှိကြ တယ်။ IQ ဟာ ဗီဇအပေါ်အခြေခံတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် မိဘမျိုးရိုးအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ Continue reading “ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုငါးရပ် – ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်” →
By Htoo Myat Thuin Motivational Quotes September 25, 2016 October 14, 2016 62 WordsLeaveacomment
Sell-More-Seat (Worldticket) System Training (Part 1)
System Requirement: Flash Player Installation
System အတွက် အဓိက “Internet” နှင့် “Browser” ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
System အတွက် အသုံးပြုရန်ကောင်းသည့် Browser များ:
Continue reading “Sell-More-Seat (Worldticket) System Training (Part 1)” →
By Htoo Myat Thuin Aviation September 24, 2016 July 19, 2017 255 WordsLeaveacomment